NetBeans 12.5 Inosvika neYedzo Java 17 Tsigiro, Bug Fixes, uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
NetBeans 12.5 Inosvika neYedzo Java 17 Tsigiro, Bug Fixes, uye Zvimwe
La Apache Software Foundation (ASF) ichangobva kuziviswa kuburitswa kweshanduro nyowani 12.5 nharaunda yekusimudzira NetBeans, mairi dzinoda kusvika zana nemakumi matatu kudhonza zvikumbiro zvakagadziriswa yeiyo yekuvandudza, ivo vanoreva kune akawanda mabug fixes uye kugadzirisa muJava, pamwe neiyo Gradle uye Maven kuvaka maturusi.
NetBeans ndeye yemahara yakasanganiswa yekuvandudza nharaunda, waita kunyanya yemutauro weJava programming uye kuti zvakare ine akakosha manhamba emamojuru ekukuwedzera. NetBeans inobudirira kwazvo yakavhurwa sosi projekiti ine hombe mushandisi base, nharaunda inogara ichikura.
1 NetBeans 12.5 Main Zvitsva Zvimiro
2 Maitiro ekuisa NetBeans 12.5 paLinux?
NetBeans 12.5 Main Zvitsva Zvimiro
Mune ino vhezheni nyowani yeNetBeans 12.5 shanduko zhinji dzakanangana nekugadziriswa kwe bug, apo muchidimbu de mashoma ekuvandudza anomira pachena, asi iwo akakosha, nekuti semuenzaniso Zvinosanganisira kuwedzerwa kwehwindo kuti ushande nemataurirwo akajairwa munharaunda yeJava.
kunze kwaizvozvo Java 17LTS (ichangobva kuburitswa) zviri pamutemo zvatove kushandiswa muNetBeans, asi kusangana kwacho kuchiri kuyedza, nepo Java 8 ne11 dzichiramba dzakasarudzika shanduro dzeLTS dzekushandisa zvine zvibereko. Pamusoro pezvo, NetBeans 12.5 inopa zvimwe zvinowedzera, senge izvo iyo LSP server (Mutauro server protocol) yakawedzeredzwa kuti isanganisira inoshambadza Java mazano uye pachinzvimbo che .java mafaera, .class mafaera izvozvi anomhanya zvakanyanya kana yakakodzera kirasi yatovepo.
Imwe yeshanduko inomira pachena ndeye kunatsiridzwa rutsigiro rweiyo Gradle uye Maven kuvaka masisitimu, saka aIni ndinoshanda ne chishandiso chekuvaka Maven, vagadziri vanogona ikozvino kubata mapurojekiti mune https namespace. Nyaya ine Maven webhu kunyorera yakagadziriswa iyo, zvine chekuita nePayara Micro Maven maturusi, inogona kutungamira kumabasa akacheneswa kana achangobva kugadzirwa kuitwa kuti awanikwe kaviri.
ari Gradle LSP inogadziridza izvozvi inobvumira kumisikidzwa kuitwe zvakananga muchombo chekuvaka, semuenzaniso, kushandisa iyo "- inoenderera" maitiro kuita. Kune rimwe divi, kuti udzivise hunhu hunogumbura hwehunhu mu "- inoenderera" maitiro kuti igone kugadzikana, zvimwe zviito izvozvi zvinogona kuremadzwa neveGradle vanoita zviito. Nenzira iyi, iwe unogona kudzivirira iyo debugger kubva kutangazve iyo application nguva dzese painenge yachengeta iyo projekiti mafaera.
Kune rimwe divi, inoratidza zvakare kuwedzerwa kwerutsigiro rweJakarta EE 9 GlassFish 6, shanduko diki muC ++ uye PHP rutsigiro, kuwedzerwa kwekugona kwechinhu kugona kune VSCode maturu ekubatanidza uye mafaera-akavakirwa mafaera.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni itsva, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa NetBeans 12.5 paLinux?
Kune avo vanoda kuwana iyi nyowani vhezheni, ivo vanofanirwa kurodha pasi sosi kodhi yekushandisa iyo inogona kuwanikwa kubva kunotevera chinongedzo.
Paunenge uchinge waiswa zvese ipapo, Unzip iyo ichangobva kurodha faira kune dhairekitori raunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » NetBeans 12.5 Inosvika neYedzo Java 17 Tsigiro, Bug Fixes, uye Zvimwe
Linux Foundation Inoti Mabhizinesi Akatotanga Kuda Kudhira Kwemakore Unyanzvi
Chii chinonzi AppArmor uye kuti chinovandudza sei kuchengeteka muLinux